“ကျွန်မ ဘ ၀ အ တွက် စံ န မူ နာ ကောင်း ခဲ့ သော ကျွန် မ ၏ အစ် ကို”အ ပိုင်း-( ၂ )ဇတ်သိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ကျွန်မ ဘ ၀ အ တွက် စံ န မူ နာ ကောင်း ခဲ့ သော ကျွန် မ ၏ အစ် ကို”အ ပိုင်း-( ၂ )ဇတ်သိမ်း
“ကျွန်မ ဘ ၀ အ တွက် စံ န မူ နာ ကောင်း ခဲ့ သော ကျွန် မ ၏ အစ် ကို”အ ပိုင်း-( ၂ )ဇတ်သိမ်း
Posted by aye.kk on Oct 8, 2012 in My Dear Diary | 15 comments
အစ် ကို က တော့ သူ့ ရဲ့ ။ စာ မျက် နှာ အ ရွက် (၄၀) ပါ တဲ့ ။ အ သုံး ပြု ထား ပြီး သား လေ့ ကျင့် ခဏ်း စာ အုပ် ထဲ က စာ ရွက် လွတ် တွေ ကို လိုက် ရှာ ပြီး ။ အ မှတ် အ သား တွေ လုပ် နေ တာ မြင် တော့ ။ ကျ မ က အစ် ကို့ ကို ဘာ လို့ အဲ ဒီ လို အ မှတ် အ သား လုပ် နေ ရ တာ လည်း လို့ မ နေ နိုင် ဘဲ မေး မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အစ် ကို က ကု လား မ ပြီး ခင် ဗ မာ မ မြင် စေ နဲ့ ဆို ပြီး ။ ရွတ် နောက် နောက် ပြော လိုက် ပါ တယ် ။
အဲ ဒီ စာ ရွက် လွတ် တွေ ကို ဆုတ် ဖြဲ လိုက် ရင် ရ ပြီ ဘဲ မ ဟုတ် လား လို့ ကျ မ က ပြော တော့ ။ မ သိ ရင် အ သာ နေ ပါ ။ အစ် ကို လုပ် တာ ကို သာ ကြည့် ထား လို့ ပြော တော့ ။ ကျ မ လည်း ငြိမ် ငြိမ် လေး နဲ့ သာ အစ် ကို လုပ် သ မျှ ကို ။ အစ အ ဆုံး ကြည့် နေ မိ ပါ တယ် ။ အစ် ကို က စာ ရွက် လွတ် တွေ ကျန် နေ တဲ့ စာ အုပ် ရဲ့ အ လယ် ဗ ဟို က နေ (ချုပ်) စက် နဲ့ ညှပ် ထား တဲ့ က လစ် တွေ ကို ။ ခဲ တံ ချွန် တဲ့ ဓါး ပါး ပါး လေး နဲ့ ဟ ထုတ် ပြီး ။ စာ ရွက် တွေ ကို အ လိုက် တ သင့် ဖြုတ် နေ တာ တွေ့ ရ ပါ တယ် ။
ပြီး တော့ မှ ဖြုတ် ထား တဲ့ ။ အ စုံ လိုက် ပါ လာ တဲ့ စာ ရွက် ရဲ့ အ လယ် စင် တာ က နေ တိ တိ ကျ ကျ ။ ဓါး ပါး လေး နဲ့ အ ရာ ပေး ပြီး ဖြတ် ယူ လိုက် ပါ တယ် ။ သေ သေ သပ် သပ် လုပ် တတ် တဲ့ အစ် ကို ပါ ဘဲ လို့ ကျ မ စိတ် ထဲ မှတ် ချက် ချ မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အစ် ကို က အဲ ဒီ လို မ လုပ် ပဲ နဲ့ လွတ် တဲ့ အ တိုင်း ဆွဲ ဖြုတ် လိုက် ရင် ။ အ ခန့်မ သင့် ရင် စာ ရွက် က ညီ ညီ ညာ ညာ မ ဖြစ် ပဲ စာ ရွက် အ သား ပြဲ သွား ရင် ။ စာ ရွက် တ ရွက် က အ လ ဟဿဖြစ် သွား နိုင် တယ် ။
မ ညီ မ ညာ နဲ့ ချုပ် ထား ရင် ၊ ကြည့် လို့ မ ကောင်း တဲ့ အ ပြင် ၊ အ ကဲ့ ရဲ့ ခံ ရ နိုင် တယ် ။ အ ကြမ်း သုံး စာ အုပ် လို ပုံ စံ ပေါက် ရင် ကျောင်း မှာ သွား သုံး လို့ မ ရ ဘူး ။ အိမ် မှာ ပဲ အ ကြမ်း တွက် ဘို့ ချ သုံး တဲ့ စာ အုပ် ပဲ လုပ် လို့ ရ မှာ ။ အ ဖေ က အစ် ကို့အ တွက် ဗ လာ စာ အုပ် တ အုပ် ၀ယ် ပေး ရ တာ ။ သက် သာ သွား နိုင် တယ် ။ အစ် ကို ပြန် ပေါင်း ချုပ် ထား တဲ့ စာ အုပ် တွေ ကို ။ ဆ ရာ မ က အ ကြမ်း စာ အုပ် မှန်း တောင် မ ထင် မိ ဘူး ။ အ ကြမ်း စာ အုပ် မှန်း သိ သွား ရင် ဆ ရာ မ က လက် ခံ မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။
ဒါ ဆို အစ် ကို ဘီ ဒို စာ အုပ် စင် က ၊ စာ ရွက် ရေ (၅၀၀) ပါ တဲ့ စာ အုပ် က အစ် ကို ကိုယ် တိုင် ချုပ် ထား တဲ့ စာ အုပ် ပေါ့ ။ ဟုတ် လား ဟင် လို့ မေး လိုက် မိ ပါ တယ် ။ အစ် ကို က ကျ မ မျက် နှာ ကို သေ သေ ချာ ချာ ကြည့် ပြီး ။ အ ဖေ ပေး တာ ပါ ပြော တော့ ။ ကျ မ က အင်း ထင် တော့ ထင် သား ဘဲ ။ ချုပ် ထား တာ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး ဆို ပြီး ထင် မိ သား ဘဲ ။ ချုပ် ထား တဲ့ နေ ရာ လည်း အ စ န တောင် ရှာ မ တွေ့ဘူး ပြော တော့ ။ အစ် ကို က ရယ် ကျဲ ကျဲ လုပ် နေ ပါ တယ် ။
ကျ မ ရှေ့တင် အစ် ကို က ၊ စာ ရွက် အ လွတ် န ခမ်း သား ကို အပ် ရာ အ ရင် ပေး ပြီး ၊ ပိုး ချည် အ ကျစ် နဲ့ ချုပ် ပါ တယ် ။ စ က္ကူ ကပ် တဲ့ ကော် နဲ့ ၊ န ခမ်း သား တွေ ကို အ သေ အ ချာ ထပ် သုတ် ပြီး မှ သာ မျက် နှာ ဖုံး အ ခွံ လွတ် တ ခု ယူ ပြီး ပြန် အုပ် ပါ တယ် ။ မ သိ ရင် တော့ တ ကယ့် န ဂို မူ လ စာ အုပ် လား လို့ အ မှတ် မှား ယူ လောက် ပါ တယ် ။
ကဲ ကဲ…ဗ မာ မြင် လို့ ရ ပြီ ။ အ ကြမ်း စာ အုပ် နဲ့ တူ နေ သေး လား မေး တော့ ။ မ တူ ဘူး လို့ ဖြေ မိ ပါ တယ် ။
အေး အ စော တုံး က ညီ မ လေး ပြော တဲ့ အ ရွက် (၅၀၀) ပါ တဲ့ စာ အုပ် က ၊ အစ် ကို ကိုယ် တိုင် ချုပ် ထား တဲ့ စာ အုပ် ဘဲ လို့ပြော တော့ ။ ကျ မ လည်း အစ် ကို့ ကို မျက် လုံး အ ၀ိုင်း သား နဲ့ ကြည့် ပြီး ။ အံ သြ မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။
သြော်…..ဟု သာ ဆို နိုင် ပြီး ။ စေ့ စပ် သေ ချာ တဲ့ သေ သပ် တဲ့ အစ် ကို့ကို လက် ဖျား ခါ ချင် မိ လောက် အောင် စိတ် က ခံ စား လိုက် ရ ပါ တယ် ။ နောက် ရက် တွေ မှာ တော့ အစ် ကို က သူ့ ရဲ့ အ ချိန် ဇ ယား ကို အ ဖေ့ ကို ပြ နေ တာ မြင် ပါ တယ် ။ မ နက် စာ ဘ ရိတ် ဖတ် စား ပြီး တဲ့ အ ချိန် ။ မ စား ခင် အ ချိန် ။ နေ့ခင်း အ ချိန် ။ ည နေ ခင်း အ ချိန် ။ တစ် နေ့တာ သူ့ ရဲ့ အ ချိန် ဇ ယား ကို အ ဖေ က ကြည့် ပြီး ။ သ ဘော ကျ လက် ခံ ခဲ့ ပါ တယ် ။ မ နက် အိပ် ရာ ထ မျက် နှာ သစ် ပြီး တာ နဲ့ ။ နံ နက် ( ၀၆း-၀၀ ) နာ ရီ က နေ ( ၀၇း၀၀ ) နာ ရီ အ ထိ ။ ဘော် လီ ဘော ။ ကြက် တောင် ရိုက် လေ့ ရှိ ပါ တယ် ။
ပြီး ရင် ။ ရေ မိုး ချိုး ပြီး ၊ ဘ ရိတ် ဖတ် စား ပါ တယ် ။ (၀၈း၃၀) နာရီ က နေ (၀၉း၀၀) နာ ရီ မှာ ။ မြန် မာ့ အ သံ က လွှင့် တဲ့ အ င်္ဂ လိပ် ပိုင်း အ စီ စဉ် နား ထောင် ပါ တယ် ။ (၀၉း၃၀) နာရီ က နေ (၁၁း၀၀) နာ ရီ မှာ သူ ငယ် ချင်း တွေ နဲ့ ရေ ကူး ထွက် ပြီး ။ (၁၂း၀၀) မ တိုင် ခင် နေ့ လည် စာ ထ မင်း သုံး ဆောင် ပါ တယ် ။ နေ့ ခင်း အ င်္ဂ လိပ် ပိုင်း အ စီ စဉ် ရေ ဒီ ယို နား ထောင် တတ် ပြီး ။ ရေ ဒီ ယို နား မ ထောင် တဲ့ အ ချိန် ။ လေ သေ နတ် ပစ် တာ ။ ခြံ နောက် ဖေး မှာ သူ ငယ် ချင်း တွေ ခေါ် ပြီး က စား တာ မျိုး ရှိ တတ် ပါ တယ် ။ ည နေ (၁၅း၃၀) နာ ရီ က နေ (၁၆း၃၀) နာ ရီ အ ချိန် ဘောင် ဆင် ထိုး တာ လေ့ ကျင့် ပါ တယ် ။ ဘောင် ဆင် ထိုး တာ ကို တော့ နေ့စဉ် ပုံ မှန် လေ့ ကျင့် ပါ တယ် ။ ည နေ (၁၇း၀၀)နာ ရီ က နေ (၁၈း၀၀) နာ ရီ အ ထိ က ရေ မိုး ချိုး ပြီး ။ ည နေ စာ ထ မင်း သုံး ဆောင် ပါ တယ် ။
မ နက် ခင်းပိုင်း (၀၉း၃၀) နာ ရီ က နေ (၁၁း၀၀)နာရီ ထိ က တော့ ၊ ရေ ကူး ။ စစ် တု ရင် ။ ပန်း ချီ ဆွဲ ။ ဂစ် တာ တီး ။ က ရာ တေး ။ က စား တာ တွေ ကို တော့ ။ ရက် ပြောင်း ပြီး လုပ် သွား ပါ တယ် ။ အစ် ကို ရဲ့ နေ့စဉ် ပုံ မှန် ဆွဲ ထား တဲ့ ဇ ယား အ တိုင်း နေ ထိုင် တာ ။ ကျ မ က အ လွတ် ရ နေ ပါ တယ် ။ သူ ငယ် ချင်း တွေ က သူ့ကို အ လွန် တော် လို့ ချစ် စ နိုး ခေါ် ကြ တဲ့ နာ မည် ပြောင် တ လုံး ပေး ထား တာ ရှိ ပါ တယ် ။ အား လုံး ထဲ မှာ အ မြဲ ဗိုလ် စွဲ တဲ့ နေ ရာ မှာ ရှိ နေ တဲ့ အ ပြင် ။ ဘာ ဘဲ ပြိုင် ပြိုင် အ မြဲ တန်း အ နိုင် ချည်း ဘဲ ရ တာ မို့ ။ ကို ဗိုလ် နိုင် ဆို ပြီး ချစ် စ နိုး ခေါ် ကြ ပါ တယ် ။
တ ရက် မှာ ကျ မ တို့ မောင် နှ မ တွေ က ။ ပန်း ချီ ဆွဲ တာ ကို လက် တွေ့ ပြ ခိုင်း မိ ပါ တယ် ။ သူ့ပုံ ကို သူ နဲ့ တူ အောင် ဆွဲ ပြ ခိုင်း မိ ကြ ပါ တယ် ။ မှန် ရှေ့သူ့မျက် နှာ ကြည့် ပြီး ခဲ နဲ့ ကောက် ကြောင်း ဖော် ပြီး ဆွဲ ပြ တာ (၁၀) မိ နစ် မ ကြာ ပါ ဘူး ။ အ လွန် ကို ထပ် တူ ကျ အောင် ဆွဲ ပြ နိုင် ခဲ့ ပါ တယ် ။
ကျောင်း မှာ စစ် တု ရင် ပြိုင် ပွဲတွေ ပြု လုပ် တဲ့ အ ခါ ၊ အစ် ကို ၀င် ပြိုင် ပါ တယ် ။ ပြိုင် ပွဲ မှာ အ နိုင် ရ ပြီး ၊ အ မြဲ ဗိုလ် ပဲ စွဲ ပါ တယ် ။ က ရာ တေး မှာ လည်း ခါး ပတ် အ နက် အ ဆင့် ရ ရှိ ထား လို့ ။ ဘက် စုံ ထူး ချွန် လို့ အ လွန် တော် တဲ့ အစ် ကို ပါ ဘဲ လို့ မောင် နှ မ တွေ က ချီး မွမ်း ထော ပ နာ အ သိ မှတ် ပြု ခဲ့ ကြ ရ ပါ တယ် ။
အစ် ကို အ သက် (၁၈) နှစ် ပြည့် တုံး က ၊ ရန် ကုန် မှာ ကား မောင်း သင် တန်း တက် ခဲ့ တုံး က လည်း ။ အ သက် အ ငယ် ဆုံး ကား မောင်း ကျွမ်း ကျင် သူ အ ဖြစ် ဆု ချ ခံ ရ ဘူး ပါ တယ် ။
အစ် ကို့ အ ကြောင်း စာ ဖွဲ့ ရင် မ ကုန် နိုင် ပါ ဘူး ။ ကျ မ ဘ ၀ အ တွက် စံ န မူ နာ ကောင်း ခဲ့ သော ကျ မ ၏ အစ် ကို လို့ သာ ဆို ချင် မိ ပါ တော့ တယ် ။။။
ဒီလောက်တော်တဲ့ အန်တယ်ဂျီးကို ရှစ်လေးလုံးမှာ မတွေ့လိုက်ရပါလား။ အန်တီပဒုမ္မာကတော့ ဆိုင်ဘူးတဲ့၊ သူတို့လူရည်ချွမ်တွေလည်း အဲလောက်တော့ တော်တာပဲတဲ့၊ ဒို့အရေးအော်တုန်းက နှာစေးနေလို့ အိမ်ပြင်မထွက်တာ၊ အခုမှ တကယ်လုပ်တော့မှာတဲ့။ မယုံရင် ဝံကျီးအဖွဲ့ထဲမှာ လူရည်ချွမ် ပါနေဗီဆိုပဲ။ ဂုမ်ရူပါ တယ်ဗျာ..။
အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်တာ မကျေနပ်ရင် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့ ဖမ်းပစ်မယ်။ ပထမဗိုလ်ကြီးအောင်ကြူး :bar:
ဗိုလ်မူးအောင်ပု နဲ့ ဘယ်သူက စီနီယာပိုကျသလဲခင်ဗျ
နဲ့ ဗိုလ်ကြီးအောင်ကြူးကိုအထူးကြောက်သဖြင့်ရှောင်ပါကြောင်း။။(ခင်လို့ စသည်)
မအေးရေ အတော်စေ့စပ်သေချာတဲ့ အကိုဘဲနော်၊ စာဖွဲ့ရင်မကုန်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ဒီမှာဘဲရပ်လိုက်တာလားဟင်။
အစ်ကိုဆိုရင် ညီမတွေက အသေးအဖွဲလေးကအစ အားကိုးချင်တဲ့စိတ်ရှိကြတာပဲ….
ညီမလေးအပေါ်လည်း အားကိုးရတဲ့အစ်ကိုအကြောင်းတွေများ ရေးလာအုံးမလား
နှင်းနှင်းလည်း တီကေ့အားကျပြီး ရေးရင်ကောင်းမလားလို့…
‘ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရတဲ့ ညီမ နှင့် အစ်ကိုများ’ ဆိုပြီး….
အန်တီ့ရဲ့ အစ်ကိုကို လေးစာမိသလို အဲဒီလိုအစ်ကိုရထားတဲ့ အန်တီ့ကိုလည်း အားကျမိပါတယ်…
အစ်ကို့ကို အတုယူသွားပါကြောင်းနှင့် နောင်မျိုးဆက်များအတွက် မှတ်သားသွားပါကြောင်း.. :harr:
အမလည်းသားတွေကိုဘွဲ့ ရပညာတတ်ဘို့ အ တွက်၊နေ့ စဉ်လွယ်အိပ်တွေစစ်ဆေးခဲ့ရဆူခဲ့ရ။ အခုမှသာ။အနားရပါတော့တယ်။
အန်တီအေးရေ ညီမတွေ ထဲမှာ ကိုယ်က အသက်ကြီးဆုံး ဖြစ်နေတာမို့ စံနမူနာကောင်းဖြစ်ခဲ့သလား မဖြစ်ခဲ့ဖူးလား သိပ်မသေချာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေနဲ့ နေခဲ့တာမို့ ပြသာနာမရှိခဲ့သလို တော်တော်များများ ကိုယ်ပြောရာပြီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ ကို ထပ်ချပ်မကွာ ကိုယ့်ခြေရာ လိုက်နင်းနေကြတာမို့ ခုဆို ကျမမှာ မျက်လုံးတွေ ပြူးနေရပါတယ်။ အိမ်ကလူကြီးတွေကတော့ ပြောရှာတယ်။
ဝင်ပြီး အားပေးသွားတယ်လို့ အသိပေးတာပါ။
အစ်မ မိဘများ စနစ်ကျကျ သားသမီးတွေကို ပျိုးထောင် ခဲ့တာ အသေအချာဘဲ။
အစ်မလဲ စနစ်ကျမဲ့ စံနမူနာကောင်း ပုံပါဘဲ။
သူ့ ဇာတာအရပညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူလို့ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစ်မတို့ ကတော့၊အစ်ကို့ ရဲ့ သွေးပါမပါဘယ်နားမှာဖောက်ထုတ်ပြီးစစ်ကြည့်ရမလည်းပါဘဲ။
အစ်ကို့ နဲ့ တူတဲ့သွေးဘယ်နားမှာရှာရပါ့မလည်းဖြစ်မိတယ်။
သီချင်း(ရွှံ့ ပေါ်ရှဉ့်ပြေးရှဉ့်မွှေးရွှံ့ မလူး)ကိုဆိုနိုင်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတခုမှာလျှာမလိမ့်ပဲဆိုပြနိုင်ခဲ့
လို့ ဆုချတာခံရဘူးပါတယ်။ဘက်စုံတော်ခဲ့တဲ့အစ်ကိုလို့ ပဲပြောရမှာပါ။။
အဖေကအစ်မကိုဆိုးလွန်းလို့ စစ်တပ်တခုမှာသွားပို့ ထားရတဲ့အထိဆိုးခဲ့မိပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး မဖတ်ချင်ဘူး။
ကျမဘ၀မှာလည်း ချစ်ခင်လေးစားရပြီး စံနမူနာ ကောင်းခဲ့တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
မောင်နှမတွေထဲမှာ အထက်အောက်ဖြစ်ပြီး မိသားစုအလုပ်ကို အတူတွဲလုပ်ရလို့ တသက်လုံး အနီးကပ်နေခဲ့ရတယ်။
ကျမအစ်ကိုက တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားတော့ ကျမအတွက် အ၀တ်အစားတွေဝယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက မိန်းကလေးမိတ်ဆွေရှိတယ်လို့ အထင်မှားခံခဲ့ရတယ်။
အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်ကျတော့လည်း သူ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ညီမတွေကို မျှတအောင် နေရာပေးခဲ့ ဆက်ဆံခဲ့လို့ မိသားစု သမီးယောင်းမတွေကြားမှာ ချစ်ခင်မှုကို ရစေခဲ့တယ်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပေါများပြီး လူချစ်လူခင်လည်း များခဲ့တယ်။
အဖေဆုံးပါးသွားပြီးကတည်း မိသားစုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မိသားစုတွေက ၀ိပဿနာဘာဝနာပွားစေချင်တာကို အချိန်ရှိသေးတယ်ထင်ပြီး လုပ်ဖြစ်အောင် အစ်ကိုကို မတိုက်တွန်းမိခဲ့ဘူး။
အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုပြီး နောင်တရနေမိတယ်။ :eee:
အစ်ကို့ ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကစလို့ 